ယုံမှာလားးးးးး နောက်ဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ယုံမှာလားးးးးး နောက်ဘ၀
Posted by Ma Ma on Jan 5, 2013 in Buddhism, Creative Writing, My Dear Diary | 32 comments
နောက်ဘ၀ ယုံလား ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေကြတဲ့လူမှန်သမျှ ကြွေးကိစ္စနဲ့ ကင်းနိုင်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။
၀ယ်တဲ့အခါမှာလည်း ကြွေးယူဖို့ မကင်းနိုင်သလို……..
ရောင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကြွေးပေးဖို့ မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။
ကွမ်းယာဆိုင်တောင် အကြွေးမကင်းကြဘူး မဟုတ်လား။
ဖောက်သည်ဆွယ်ချင်လို့ ဆိုတဲ့ …..
ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အကြွေးပေးတဲ့အခါ အကြွေးဆုံးတယ်ဆိုတာကလည်း အနည်းနဲ့ အများပဲ ကွာမယ်။ မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ကြရတာပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ် ကုန်ကြွေးတွေယူသွားပြီး ပြန်မဆပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီက အကြွေးတောင်းစရာမလိုပဲ လာပြန်ပေးသွားတယ်လို့ဆိုရင်……..
ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သိပ်တော့ အံ့သြစရာ မကောင်းလှပါဘူး။
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ၊ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြမယ်။
မောင်ငြိမ်းချမ်းဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်သား ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ လူလတ်တန်းစားထဲကပေ့ါ။
ပြောတတ်ဆိုတတ် ရောင်းတတ်ဝယ်တတ်လို့ စီးပွားတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက် ရောင်းမယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို မြို့တက်ဝယ်တယ်။
ကိုယ့်မြို့မှာ ဖောက်သည်ပြန်ပေးပြီး အရောင်းအ၀ယ်ကို ချဲ့ထွင်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းနားလည်ပြီး စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ ၀ယ်နိုင်တော့ ရောင်းတဲ့အခါမှာ အများနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ပြန်ရောင်းချနိုင်တယ်။
၀ယ်နေကျ ဆိုင်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုရရှိလာတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ကိုယ်တနိုင်တပိုင်ထက်ပိုပြီး ဆိုင်တွေကနေ အကြွေးဝယ်၊
ကိုယ့်မြို့မှာလည်း အကြွေးပြန်ဖြန့်နဲ့ သားအမိ၂ယောက် အိမ်ပိုင် ဆိုင်ပိုင်တွေနဲ့ တောက်ပြောင်လာတာပေ့ါ။
စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာတဲ့အခါ အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့သားကို
မဆွေခင် ဟာ ဒေါ်အေးတို့သားအမိဆိုင်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေထဲက တစ်ဦးပေါ့။
မောင်နှမ ၅ယောက်ထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး မိသားစုလုပ်ငန်းမှာ ဦးဆောင်နေသူပါ။
ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့ မိသားစုလေးဖြစ်ပေမယ့် သွက်လက်ချက်ချာတဲ့ မဆွေခင်လေးကို ဒေါ်အေးက မျက်စေ့ကျမိတယ်။
ရိုးရိုးအေးအေး သားဖြစ်သူ မောင်ငြိမ်းချမ်းကလည်း အမေ့သဘောမို့ ဒေါ်အေးစိတ်တိုင်းကျ မောင်ငြိမ်းချမ်းနဲ့ မဆွေခင် ကို လက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။
သားအမိ၂ယောက်တည်းရှိရာက မြေးကလေး၂ယောက်တိုးလာပြီး မိသားစုပျော်ရွှင်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲ ကံကြမ္မာရိုင်းက အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်လာပါတော့တယ်။
ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မှာ စီးပွားရေးကိုချည်း လုံးပမ်းနေတဲ့ မောင်ငြိမ်းချမ်းဟာ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့လာတယ်။
(မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစစအရာရာ မတိုးတက်မှုတွေကြောင့်လို့လည်း လက်ညှိုးထိုးနိုင်တာပေ့ါ။) :eee:
အလုပ်နဲ့မို့ အနားမယူနိုင်ဘူးလို့ ဆရာဝန်ကို အကြောင်းပြလို့ရပေမယ့်….
ရောဂါကို အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတော့ ဆေးခန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ပြေးရတဲ့အဆင့်ကနေ ဆေးရုံတက်ရတဲ့အဆင့် ဖြစ်လာတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများလာတဲ့အပြင်၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေတဲ့သူက မဦးဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း အားနည်းချို့တဲ့လာတယ်။ ၀င်ငွေကျဆင်းလာတယ်။
အရင်းမှန်းမသိ၊ အမြတ်မှန်းမသိ ရောင်းရင်းဝယ်ရင်း စားရင်းသုံးရင်းနဲ့ လုပ်ငန်းက တနေ့တခြား ငွေကြပ်လာတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ပေးစရာရှိတဲ့ ကုန်ကြွေးတွေ မပေးနိုင်တော့ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားရတယ်။ ကြွေးဆုံးသူဆိုတဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်သွားတယ်။
မောင်ငြိမ်းချမ်းဟာ ကျန်းမာရေးမကောင်းရတဲ့ကြားထဲမှာ စီးပွားရေးပါကျဆင်းလာတဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားပါတော့တယ်။
အိမ်ထောင်ဦးစီးမရှိ စီးပွားရေးမရှိတဲ့ မုဆိုးမလေး မဆွေခင်ဟာ သား၂ယောက်နဲ့ ဘ၀ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက် နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပါတယ်။
လောကဓံအမျိုးမျိုးတွေခံရပြီး ပူပင်သောကတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အေးဟာ စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရှာဖွေဖို့ တရားရိပ်သာကို ရောက်သွားတယ်။
ရိပ်သာဝင်ပြီး ၀ိပဿနာ ဘာဝနာကို ရှု့မှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာ တရားရဲ့ အရသာကို တွေ့ရှိခံစားရပြီး အနည်းငယ် စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရရှိလာပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း ခိုကိုးရာမရှိဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်အေးဟာ တရားရိပ်သာမှာပဲ အမြဲတမ်းနေဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မောင်ငြိမ်းချမ်း ဆုံးပြီးနောက် ၃နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု မက်တယ်။
သားမောင်ငြိမ်းချမ်းတစ်ယောက် မောကြီးပမ်းကြီးနဲ့ ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ရောက်လာပြီး သူ့မှာဆင်းရဲပင်ပန်းလွန်းလို့ သူယူပြီး ပြန်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြွေးတွေကို ပြန်ဆပ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
အိပ်မက်မက်ပြီး စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရပေမယ့် ကုန်ကြွေးတွေကိုလည်း ပြန်မပေးဆပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ………
ဒေါ်အေးဟာ အလှူခံလို့ရတာ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေက ပေးကမ်းလှူဒါန်းကြတာတွေကို ချွေတာစုဆောင်းပြီး နေလာခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့နေလာရင်း ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ၊
ပထမ အိပ်မက်မက်ပြီး ၅နှစ်အကြာမှာ….
အမေရယ် အကြွေးတွေ မဆပ်ရသေးဘူးလား။
သားဆင်းရဲပင်ပန်းလွန်းလို့ ပြန်ဆပ်ပေးပါလို့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပြောလာပြန်တယ်။
ဒေါ်အေးကလည်း သူ့မှာပြန်ဆပ်ဖို့ ငွေမပြည့်သေးကြောင်းပြောပြတော့….
ရှိသမျှလေးနဲ့ပဲ အချိုးကျဝေငှပြီး ကျေနပ်ကြဖို့ တောင်းပန်ပေးပါလို့ ပြောပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာပဲ ဒေါ်အေးဟာ ရှိသမျှ ငွေကြေးလေးကိုပိုက်လို့ ပေးစရာရှိတဲ့ ကြွေးရှင်တွေဆီကို အရောက်သွားပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြတောင်းပန်ပြီး ကျေနပ်ကြဖို့ လိုက်လံတောင်းပန်ပါတယ်။
အကျိုးအကြောင်းသိရတဲ့ ကြွေးရှင်တွေကလည်း ကျေနပ်ပေးကြပါတယ်။
ကြွေးမြီရှင်းလင်းသွားလို့ ဒေါ်အေးဟာ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သားဖြစ်သူကို ရည်စူးလို့ ဘုရားမှာတိုင်တည်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ယူထားတဲ့ ကြွေးကို ပြန်မဆပ်နိုင်လို့ ဘ၀ပြောင်းသွားသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ သားဖြစ်သူကို ခံစားနေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲ……
အိပ်မက်ထဲမှာ လန်းဆန်းတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ သားဖြစ်သူ မောင်ငြိမ်းချမ်းက သူအနှောင်အဖွဲ့များမှ လွတ်လပ်ပြီဖြစ်လို့ သွားတော့မယ်လို့ လာရောက်နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။
မောင်လေး ညီမလေး၊ တူလေး တူမလေးတို့ တစ်တွေလည်း ပုံပြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်သလို အမျိုးမျိုးသော
အရင်တုန်းကဆို အမေက အိမ်ပြန်သွားတိုင်း ဗီရိုသော့ကိုပေးပြီး ဘယ်မှာဘာရှိတယ်..ဘယ်သူ့ဆီကဘယ်လောက်..ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီး စာရင်းနဲ့ အမြဲပြတယ်… မတော်တဆသေသွားရင် သံသရာကြွေးပါမှာစိုးလို့တဲ့..အဲ့တုန်းကတော့ သမီးက အမြဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်..သေစကား မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..သမီးကတော့ သံသရာကြွေး..နောက်ဘ၀ဆိုတာတွေကို ယုံပါကြောင်း…
အကြွေဆိုတာ စယူခါစမ ကြွေးပူတဲ့
အဲ မဆပ်ဘဲနေရသေး ကြွေးအေး ဖြစ်လာရော။ မဆပ်သေးလည်းရပါသေးတယ်ပေါ့
အဲလိုကြွေးအေးနေရင်မကောင်းဘူးတဲ့။ ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတုန်းသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး အခု အမ မမ ပိုစ့်ဖတ်မှကြွေးအေးမဆပ်နိုင်ခင်
နာ့အမကြီး အန်တီမမတော့… သူ့ရို့ပွဲရုံအကြွေးတွေ လာဆပ်အောင်
တကယ်ပါ.. အဟုတ်ပါ.. သူများအကြွေးဆိုတာ သံသရာ
ယူလို့မကောင်းပါဘူးဗျာ.. သံသရာဆိုတာလည်တယ်.. ရှည်တယ်..
ယခုဘ၀ အူးစည်အချစ်ကြွေးမပေးနိုင်သော ရွာသူလေးများလည်း
နောင်ဘ၀ နတ်သားဖြစ်မှပဲ အကြွေးချေပါ့မယ်လို့.. ဟီးး
အမေ့ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စွဲပြီး မက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဟာက ဘယ်လောက် ရာနှုန်း လဲ ဆိုတာကတော့ မိမိ ယုံကြည်မှု ပေါ်မှာ လိုက်ပြီး အနည်းအများ ကွာသွားမှာပါ။
မလတ် စိတ်အရ ဆိုရင်လဲ သူများ ဆီ မှာ ပေးဆပ်စရာကျန်မှာကို အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်။
အကြွေးကို ယူချင်သလောက် ယူနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာတောင် မယူချင်ပါဘူး။
အိမ်အကြီးကြီး ကို ကြွေးအများကြီး ယူပြီး နေမလား။
တစ်ခါတစ်ခါ လဲ အဲဒီ စိတ်တွေကြောင့် မတိုးတက်ကြတာ ပြောနိုင်သေးတယ်။
လောကီလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရာမှာလဲ Risk ဆိုတာ ကလဲ အောင်မြင်တိုး တက်မှု နှုန်း နဲ့ အချိုးကျ နေသေးတာကိုး။
တစ်ခါတစ်ခါ သူများတွေလိုလဲ မကြိုးစား၊ စိတ်ကောင်းလဲမရှိ၊ လူတွေကို ကလိမ်ကျသူတွေ အင်မတန်ချမ်းသာနေတာ တွေ့ရချိန်မှာလဲ သူတို့လဲ Risk ယူနေတာပါဘဲ လို့ တွေးမိပါတယ်။။
သံသရာကို မကြောက် တဲ့ Risk ပေါ့။
သံသရာ (တနည်း ရှေ့ဘဝ၊ နောက်ဘဝ ပေါ့) ကို ယုံဖို့ မယုံဖို့ ကတော့ တွေးမိတာလေးပါ။
သံသရာ ဆိုတာကလဲ ဘုရားသခင် လိုပါဘဲ။
ရှိမရှိ လက်တွေ့လိုက်ကြည့်လို့မှ မရတာ။
ဘုရားသခင် ကမှ ပေါ်လာရင် ရှိခိုးပါ့မယ် ပြောလို့ရတယ်။
နောင် သံသရာမှာ ဘာဖြစ်မယ် အတတ်မပြောနိုင်တာမို့ မချမ်းသာလဲ နေပါစေတော့။
တကယ်ဘဲ သံသရာ ရှိနေရင် သူများ အကြွေးတွေ နဲ့ ပြသနာ ရှင်းနေရမှာ ကို ကြောက်ပါတယ်။
အဲဒီ Risk တော့ မလိုချင်ပါဘူး။
မမ ရေ မမ ပြောချင်တာ နဲ့ လွဲများသွားပြီလား။
ဒါထက် – မမ စာလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရတာ တကယ်ဘဲ ဝမ်းမြောက်မိပါရဲ့။
ကျွန်မအဘွားဆိုရင် ရောဂါရှိပေမယ့် အစားရှောင်၊ဆေးကုပြီးနေလာတာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ။
သူကအလိုလိုသိနေပြီး ညဆို ]သား အမေ့ကိုလာခေါ်တာလား အမေလိုက်မယ်လေ}ဆိုပြီး ကယောင်ကတန်းတွေထထအော် ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ရင်ကွဲနာကျသလိုသဘောနဲ့ဆုံးသွားရှာတာ။
ဇာတ်လမ်းထဲက မောင်ငြိမ်းချမ်း နဲ့ မိသားစု အတွက်လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သူ့ခမျာ ကြိုးစားရင်း နစ် သွားတဲ့ သဘောမို့ အကြွေးကျန်တာ အပြစ်မရှိလောက်ဘူး ထင်တာပါဘဲ။
တမင် မဆပ်သွားတာမှ မဟုတ်တာ။
အနောက်တိုင်းမှာ ဆို အသက်အာမခံ ထားလိုက်ရင် အကြွေးတွေ က သံသရာ မပါတော့ပါဘူး။
အသက်အာမခံလုပ်ငန်း က အားလုံး ဆပ်ပေးသွားဖို့ အခြေအနေရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည် မှာ အကြီးအကျယ် လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဘဲ။
မြန်မာတွေလို သံသရာကြောက်သူတွေအတွက် ပိုပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။
လက်တွေ့အပြုအမူ တွေက တကယ်ရော ကြောက်တာဟုတ်မဟုတ် တောင် စဉ်းစားစရာဘဲ။
ကျွန်မ ပြုခဲ့သမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို မောင်ငြိမ်းချမ်း အတွက် အမျှပေးဝေပါတယ်။
ယူနိုင်ရင် သာဓုခေါ်ပြီး ကောင်းမွန်ရာဘဝ ကို ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါစေ။
တကယ်တော့ သူဟာ အမေ့ကို ပြုစုခဲ့တဲ့သားမို့ ပက်ပက်စက်စက် ဘဝ တော့ မရောက်သင့်ပါဘူး။
ရောက်ရင်လဲ စီရင်ချက်ချသူ ကို ကွန်ပလိပ် လုပ်ကြစို့။
အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ ကြွေးနဲ့ မကင်းနိုင်ဘူး။
အဖေရှိစဉ်က သူများဆီက ကြွေးယူရင် သားသမီးတစ်ယောက်ယောက်ကို ခေါ်သွားတယ်။
သူမရှိလည်း ယူထားတဲ့ကြွေးဆိုတာ ပြန်ဆပ်ရမယ်ဆိုပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်။
သက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းက မဆပ်လည်း အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီး နေသွားတာ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃နှစ်က အကြွေး၁သိန်းရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့ အမေက အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး ၃၀၀၀၀ လာပေးသွားလို့ အံ့သြပြီး ကိုယ့်ရွာသူားတွေကို သတိတရ ဖောက်သည်ချလိုက်တာ။
သွေးသောက်ညီအမတွေရဲ့ အားပေးမှုက တကယ့်ခွန်အားပါပဲ။
အခုလို အားဖြည့်မှုတွေကပဲ ရွာရဲ့အလှအပပေ့ါ။
ဆုပေးပွဲ လာနိုင်ရင် တွေ့ချင်ပါသေးတယ်နော်။
မမခင်ဗျား ကျနော်ကြားဘူးတာနဲ့ တူနေတယ် ရုပ်ရှင်ထဲကလူကြမ်းမင်းသား သေတော့တပတ်ကျော်မှာ သူ့မိန်းမကိုအိမ်မက်ပေးတယ် ရစရာရှိတာတွေ ပေးစရာရှိတာတွေ မနက်မိုးလင်းသူ့မိန်းမနိုးတော့ သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်မေးတော့မှန်နေတယ်တဲ့
ဘယ်တော့ ဘယ်လို ပြန်ဆပ်မယ် ဆိုတာကိုလဲ အကြွေးယူစဉ်ကတည်းက
တခါထဲ လျာထားစီစဉ် ထားသင့်ပါတယ်။
အဆင်ပြေရင်ပေးမယ် အဆင်ပြေမှပေးမယ် ဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားမျိုးရှိရင်တော့
အဲဒီလူမျိုးဟာ တဖြည်းဖြည်း ကြွေးမျိုးစုံပတ်ပြီး နာမည်ပျက် အထင်သေးခံရလိမ့်မယ်။
အဲဒါနဲ့ သူ့ကို- ကြွေးရှင်ဆီသွားပြီး အခြေအနေအမှန်တိုင်းပြောပြဖို့
ရောင်းလို့ရတာအကုန်ရောင်းပြီး အကြွေးတစိတ်တပိုင်းကို လက်ငင်းဆပ်လိုက်ဖို့
ကျန်တဲ့အကြွေးကို ဘယ်လိုဘယ်လိုပြန်ဆပ်သွားမယ်ဆိုတာကို ပြောပြဖို့ အကြံပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီကောင်က ကျုပ်အကြံကို မလိုက်နာဘူး…
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်သွားတော့တယ်…။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သေခါနီးမှာ အစွဲက အရေးကြီးတာကိုးဗျ
အဲ့ဒီ အဒေါ်ကြီးက အန်တီမမနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ (နည်းနည်းပါးပါး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့) လူတစ်ယောက်များ ဖြစ်လေမလားပဲ …..။
အကြွေးကတော့ မကင်းနိုင်ကြဘူးလို့ ထင်ပါတယ် …
ပေါရရင် အနော်တောင် အကြွေးနဲ့ ကင်းဘူး .. အဟီးးး
နောက်ဘဝ မှာ အကြွေး ဆပ်ရတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ..
ကျနော် ကြားဖူးတာက သေသွားပြီး နောက်ဘဝ ကျရင် ..
ကြွေးရှင်ရဲ့ အိမ်မှာ တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ပြီး အကြွေး ဆပ်ရတာတို့ ဘာတို့ …
အဲ့ဒီလို မျိုးတွေပဲ ကြားဖူးတာဗျ …..
ဒီထဲက ကြွေးဆပ်ရတဲ့ ပုံစံက ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲ မသိဘူးးး
အဲ့ဒီ တစ်ချက်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ် ….
ဘာပဲပြောပြော ကျနော်ကတော့ နောက်ဘဝ ဆိုတာ ယုံတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းးးး
သဂျီးပြောထားပြီးသားပါ၊ ပွိုင့်တွေက ဆိုက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ရင် ပေးစရာမလိုဂျောင်း… ဆိုတော့ အစွဲကြီးလို့ သရဲဖြစ်ခြင်းဖြစ် ရွာသားတွေပဲ ဖြစ်မယ်တူပါတယ်။
ဆိုတော့..နောက်ဘ၀..ရှေ့ဘ၀ အယူတွေယူကြပါရင်.. ဘုရားနာမယ်တတ်ပြီး..လွှဲမချကြပါနဲ့လို့ပဲ..
(တိုတိုပြောရရင်..) အဲဒီအယူကို ငါမယူဘူးလို့ဖြေထားတယ်..။
ရှိတာ..မရှိတာ..ရှိသလိုလို..မရှိသလိုလို.. မရှိရှိရှိသလိုလို.. ရှိမရှိသလိုလို.. ဟိုလိုလို..ဒီလိုလိုမဟုတ်ဖူး..
တစ်ပါးသော လောက မရှိပါသလော။ပ။
(သေ၍) တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်သော သတ္တဝါတို့ ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်ကုန်သလော။ပ။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် ရှိပါသလော။ပ။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် မရှိပါသလော။ပ။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိသလော။ပ။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ မရှိသလော။ပ။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိသလော။ပ။
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိသေးရင် ကွန်ပြူတာ၊ အင်တာနက် ရှိပါသလား သွားလျောက်ကြည့်.. အဲဒီအယူ ငါမယူ ဖြေလိမ့်မယ်။ လျှပ်စစ်၊ ညူကလီယားစွမ်းအင် ရှိမရှိ မေးလည်း အဲဒီလို ငါမယူလို့ ဖြေမှာပဲ။
ဆိုတော့..နောက်ဘ၀..ရှေ့ဘ၀ အယူတွေ မယူကြပါရင်.. ဘုရားနာမယ်တတ်ပြီး..လွှဲမချကြပါနဲ့လို့ပဲ..
ဗိမ္မသာရမင်းကြီးကို သူ့သား အဇာတသတ်မင်း နှိပ်စက်တာလည်း သိတယ်၊ မတရားနှိပ်စက်လို့ သေတော့မှာလဲသိတယ်။ ဟိုလိုဒီလိုယူပြီး ဝင်မတားဘူး၊ သေခါနီး ဘုရားရှင်က သူ့ကိုပစ်ထားတယ် ညည်းတော့မှ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်တယ်။ ပြောကြေးဆို အဇာတသတ်သည် သာသနာပြုမင်းဖြစ်မည့်သူ၊ အဖသတ်ကံသာ မကျူးလွန်ရင် ဒီဘဝမှာတင် ကျွတ်နိုင့်မည့်သူ၊ ဘာပြုလို့ အဖသတ်ကံ မထိုက်အောင် မတားမြစ်ရသလဲ။ သူ့ကံနဲ့သူ့အကျိုး၊ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းတဲ့။
ဒီလိုပဲ ဘုရင်တပါး (နာမည်မေ့နေတယ်၊ သိပ်အစားကြီးလို့ ဖက်တီးကြီးတဲ့) ဘုရားရှင်ထံ လာဖူးတော့ အရိုအသေပေးတဲ့ အနေနဲ့ မင်းမြောက်တန်ဆာငါးပါး ကျောင်းအပြင်မှာ ချွတ်ထားခဲ့တယ်။ တရားနာပြီးလို့ အပြင်လည်းထွက်ရော သူများက အဲဒီချပ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ယူသွားပြီး ဘုရင်တက်လုပ်တယ်။ ဒါနဲ့ သူ့တူ အဇာတသတ် မင်းသားထံ အကူညီသွားအတောင်း လမ်းမှာပဲ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ သေတယ်။ ရုပ်ဝါဒဆန်ဆန် တွေးကြေးဆို ဘုရားဖူးရင်း ဖြစ်တာမို့ ဘုရားမှာ သတိပေးဖို့ တာဝန်မရှိဘူးလား။ အဲဒီအယူ ငါမယူဘူးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
သဂျီးသာ မိစ္ဆာအယူစွဲပြီး ဘုရားနာမည် လွှဲချရင်း မြန်မာပြည်ဂျီး ကယ်တင်မယ် တဂဲဂဲ လုပ်နေတာ…။ :chee:
ဆင်ဖြူတော်ဆိုပြီး ဆက်သတဲ့ ဆင်မည်းကြီးအား ဘိုးတော်ဘုရားက အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးကို စစ်ဆေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ ဦးပေါ်ဦးက ဆင်ဖြူတော်အင်္ဂါ လက္ခဏာပါရှိတာမို့ နောင်နှစ်ငါးဆယ်ကျရင် ဖြူလာပါလိမ်မယ်လို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ လျှောက်တော့ ဘိုးတော်ဘုရားကလည်း မစိစစ်ဘဲ ယုံကြည်လိုက်လေ၏။
ကျန်အမတ်များက ဦးပေါ်ဦးကို နောင်နှစ်ငါးဆယ်ကြာတဲ့အခါ ဒီဆင် မဖြူ လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ မေးမြန်းကြတဲ့အခါ ဦးပေါ်ဦးက နောင်နှစ်ငါးဆယ်ကြာရင် အဲဒီဘိုးတော်ဘုရင်လည်း မရှိတော့ဘူး၊ ဒီဆင်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ကျုပ်တို့လည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဟု ပြန်ပြောလေ၏။
နောင် အနှစ်ငါးဆယ်မှ ကိစ္စကို ဦးပေါ်ဦးက ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောသလိုပဲ ယနေ့တရားဟော (၀တ္ထုရေး)ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်း ဘုရားဟောတယ်ထင်ပြီး သေပြီးနောက် ကိစ္စ ­များကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဟောပြောနေကြတာကို ဘိုးတော်ဘုရားလိုပဲ လူတွေက မစိစစ်ပဲ ယုံကြည်နေကြ၏။
မမ ရေ အကြွေးမကင်နိုင်လို့
သာသနာမှာ ထင်ရှားတဲ့ အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးက သူ့ကျောင်းမှာ ငရဲရှိသည်၊နတ်ပြည်ရှိသည်၊ရှေးဘ၀ရှိသည်၊နောက်ဘ၀ရှိသည်လို့ ရေးထားပါသတဲ့။ရောက်ဖူးသူများအတည်ပြုပေးပါ။
မြတ်စွာဘုရားက `နစသော နစအညော´ လို့ ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာ ပါချုပ်တရားထဲမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။
သူလည်းမဟုတ် အခြားသူလည်းမဟုတ် ၊
မောင်ငြိမ်းချမ်း သေသွားပြီး နောက်တစ်ဘ၀ဖြစ်တဲ့ သတ္တ၀ါဟာ မောင်ငြိမ်းချမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။မောင်ငြိမ်းချမ်းရဲ့ ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ ကင်းတဲ့ အခြားသူတစ်ဦးဦးလည်းမဟုတ်ဘူး။
ဖယောင်းတိုင်မီးကူးသလို၊တောင်နံရံက ပဲ့တင်သံပြန်လာသလို၊မှန်ထဲမှာ ပုံရိပ်ထင်သလို ၊တံဆိပ်တုံးနဲ့ တံဆိပ်နှိပ်သလို ဆိုပြီး ဥပမာပေါင်းများစွာပြပြီးဟောခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ရိုက် Yes or No ဖြေလို့မရတဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ မြတ်စွာဘုရားက ဒီလိုအယူမယူဘူးလို့ ဆိုချင်တာလို့ မြင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ ဖြေလည်းနားမလည်နိုင်တဲ့ သိရလို့လည်း အကျိုးမရှိတဲ့ စကြ၀ဠာကြီး ဘယ်ကစတယ်။ဘယ်လောက်ကျယ်တယ်။ သတ္တ၀ါများဘယ်ကစတယ် ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဖြေတော်မမူလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
ဒီလို အိမ်မက်က မက်တဲ့သူက ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့သာ အဲ့ဒီလို့အိမ်
မက်မျိုးမက်တာပါ အဲဒီသူဟာ တခြားဘာသာဝင်တစ်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
သူဘာသာရဲ့ အယူအဆအတိုင်း အိမ်မက်မက်မှာပါပဲ။ တကယ်ပဲ သေတဲ့သူက အိမ်
မက်ပေးတာလား အရီးခင်လတ်ပြောသလို အမေရဲ့အစွဲကြောင့်မက်တာလား
မေးရမလိုပါပဲ ။ အိမ်မက်ဆိုတာကတော့ သေတဲ့သူကိုမှမက်တာမဟုတ်ပါဘူး မသေတဲ့သူကိုလည်းမက်တာပါပဲ သူဌေးကြီကို လူမွဲကြီးအဖြစ် လူမွဲကို သူဌေးကြီးအဖြစ် အိမ်မက်နိုင်တာပါပဲ။ အိမ်မက်နဲ့တော့ ရှေ့ဘ၀ရှိတာမရှိတာကို သက်သေမထူနေသင့်ပါဘူး။ ဘ၀ရှိတယ်ယူယူ မရှိဘူးယူယူ သစ္စာတရားအသိနဲ့ဘာမှမပတ်သက်သေးပါဘူး ။ တကယ်တန်း
ကိုယ်လုပ်ရမှာက အခုကိုယ့်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကို သိအောင်လုပ် ပြီး
ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကို ပယ်သတ်တဲ့လုပ်ငန်းသာ လုပ်သင့်ပါတယ်
အဲဒီအိပ်မက်ကို မက်တဲ့သူက ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမေဖြစ်သူက ဒုက္ခတွေရောက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ဘာသာပြောင်းလာတဲ့သူပါ။
– အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး မဟုတ်..
– ပါချုပ် ဆရာတော် ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလ မဟုတ်..
ကိုယ်တိုင်တော့ ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာမို့ ….
ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သလို၊
သံသရာလည်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ဆိုတာ လူပြိန်းလို အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ။
ပဒုမ္မာပြောသလို ဥပမာတွေနဲ့ ကြားနာဖူးသလောက်ပဲ နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။
အရင်က ဒါမျိုးတွေ ကြားဖူးပေမယ့် ကိုယ်တိုင် (ဒီတစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ပါ) တွေ့ကြုံလာရတော့……
ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ဆိုတာကို ငြင်းကြဖို့ထက်….
ပြုခဲ့တဲ့ ကံဟာ အရိပ်ပမာ သံသရာလည်သ၍ လိုက်ပါနေတယ်ဆိုတာကို သိရှိပြီး….
ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို စွမ်းနိုင်သရွေ့ ပြုကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
“လောကသည် အဆုံးရှိ၏ဟုငါမဟောကြား၊ လောကသည် အဆုံးမရှိဟု ငါမဟောကြား၊ “
ထိုအကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့် ငါမဟောကြားသနည်း၊ မာလုကျပုတ္တထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွါးနှင့် မစပ်၊ မြတ်သောသာသနာတော်၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်၊ ဝဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂကင်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂချုပ်ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်း အရာကို ငါဘုရားမဟောကြား။
အဆိုးယ ကို အခွန်ကြွေးပေးဖို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့အချိန်မှ
ဒီပိုစ့် ဖတ်မိပလေတယ်… အော်…..
စိတ်ထိခိယက်တွားဘီ မာမား ရယ်….
ဒီရက်ထဲ ကြွေးဟောင်းရကိန်းရှိလို့ပဲလား မသိဘူး။
၂ယောက်တောင် အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ အကြွေးလာဆပ်သွားတာ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်က ၁ သိန်းရစရာရှိတဲ့သူက သေအံမူးမူးဖြစ်နေချိန်မှာ သူ့သားသမီးတွေကို မှာသွားလို့ လာဆပ်သွားတာ။
အခုတစ်ယောက်ကတော့ သေတာ ၈နှစ်ရှိမှ သူ့အမေက လာဆပ်သွားတာ။
အဲဒါကြောင့် ရွာထဲမှာ ပြန်မျှဝေချင်စိတ်တွေ ပြင်းထန်လာတယ်။
ဒီရွာမှာ ဒီလိုတွေတင်ရင် ဒါမျိုးတွေ လာမယ်ဆိုတာကို သိနေရဲ့သားနဲ့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်တင်မိတာ။
အပေါ်က စိတ်ထိခိယက်တဲ့ သူငယ်ရေ-
အခွန်ရှောင်ဖို့ စဉ်းစားနေချိန်မှာ မဟုတ်ပဲ အခွန်ကြွေးပေးဖို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဖတ်မိတာမို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လိုက်ပါ။
ယုံတယ်လို့ ပြောမလို့ဟာ ခုတော့ ….
သဂျီးက နောက်ဘ၀ကိုယုံ၇င် ပို့ပေးမယ်ဆိုလား….
မဝေ ပို့ စ်မှာပြောခဲ့တာထင်တယ် ….
ခုမှ တိတ်တိတ်လေးဝင်ပြောရဲတာ …
မရှိတာနဲ့ မယူတာနဲ့ မတူဘူးနော် ..
သတ္တ၀ါတွေရဲ့အစ ဘယ်ကလဲလို့မေးရင် ဖြေရသိပ်ခက်တယ် .. အကျိုးလဲမရှိဘူးမို့လို့ အဲဒီလိုအမေးအတွက် အဖြေပေးရလဲခက်တာမို့လို့ မမေးသင့် မယူသင့် မတွေးသင့်ဘူး … ဒါပေမယ့် ရှိတယ် … သတ္တ၀ါတွေမှာ အစရှိသလို အဆုံးလဲ ရှိမှာပဲ … ကမ္ဘာကြီးလဲ ပျက်တတ်တယ် … ပြန်ဖြစ်တတ်တယ် … ဒါပေမယ့် အဲဒီအယူအဆတွေကို လက်ခံပြီးလျှောက်လိုက်နေရင် မဆုံးနိုင်လို့ အဲဒီအယူကိုလဲ မယူတာ အကောင်းဆုံးပဲ ..
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ တွေရှိကြောင်း သက်သေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့သလို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီး လက်ခံနိုင်ပါတယ် .. ယုံလဲယုံကြည်တယ် … အဲဒါကြောင့်လဲ မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ပြီး ကောင်းမှုတွေပဲ လုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတာပေါ့ …
လူတိုင်းလူတိုင်း သံသရာကြွေးကို ကြောက်တတ်ကြပါစေလို့ ….
မရှိတာနဲ့.. မယူတာ.. (လုံးဝ)လုံးဝ မတူပါဘူး..
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပြောဟောထားတာ.. ရှင်းလွန်းလို့.. ရှင်း..ရှင်း..ရှင်း..ရှင်းဖြစ်နေတာကို..
ဆိုတော့..ကျုပ်ကလည်း.. နတ်ပြည်..နောင်နောက်ဘ၀တွေ…ရှိနိုင်ကောင်းရဲ့.. ထင်တာပါပဲ..
နတ်ပြည်ရှိတာမျိုးဆို.. တော်တော့်ကို.. သေချာတယ်..
စင်္ကြာဝဌာမှာ… အဆုံးရှိမယ်ဆိုတာလည်း.. တော်တော်သေချာတယ်..
အကျိုးစီးပွါးနှင့် မစပ်၊ မြတ်သောသာသနာတော်၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်၊ ဝဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂကင်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂချုပ်ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊
ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို သုံးသပ်စဉ်းစားရင်.. အဲဒီအယူကို..ယူလိုက်တာနဲ့.. ငရဲကျတာပဲ..။ သံသရာ.. ချာလပါတ်လည်ပါတယ်..။
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ ယုံတာ မယုံတာ ငြင်းကြတာလား.. ဒါမှ မဟုတ်.. လူလောက မဟုတ်တဲ့ တပါးသော လောက ရှိမရှိ ငြင်းကြမှာလားဟင်..
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ ကိစ္စ ပြောတာ ဆိုရင် အဲ့ဒီ ကိစ္စ ဆက်ပြောမယ်..
လူလောက မဟုတ်တဲ့ တပါးသော လောက အကြောင်း ဆိုရင် တပါးသော လောက အကြောင်း ဆက်ပြောကြတာပေါ့..
ဒီပိုစ်လေးက.. ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ နဲ့ လူဘ၀ က သေပြီးနောက် တပါးသော လောက (ပြိတ္တာ) ဘ၀ ရောက်တဲ့ အကြောင်း.. ၂မျိုးလုံး ပါအောင် ပြောရမယ် ဆိုရင်..
မယုံရင် သေကြည့်ကြပါလား.. မသေခင် တယောက် ကို မြန်မာငွေ ၁၀ အကြွေး ပေးလိုက်မယ်.. အကြွေးမှတ်ထားပေးမယ်နော်.. ကွိကွိ.. ကိုယ်တွေ့ကြုံလို့ ယုံနိုင်ပါစေသတည်း။
နောက်မှ တခေါက် အတည် ပြန်လာခဲ့မယ်..
အပေး အယူ ဆိုတာရှိတဲ.အတွက်..ကိုယ်ကပေးထားရင်လည်း ပြန်ရချင်တာပဲ.
ယုံတယ် မမ။ အမျိုးထဲ ကျမနဲ့ ရွယ်တူ အဒေါ် သူ့အမျိုးသားဆုံးတော့ တော်တော်နဲ့ မကျွတ်ဖူး။ သူက ခရစ်ယာန်ပေါ့။ သူဆုံးကာစမှာ ကလေးက လသားပဲ ဆိုတော့ စိတ်မချတာလည်း ပါမှာပေါ့။ နေရထိုင်ရဆင်းရဲလွန်းလို့ ခဏခဏအိမ်မက်ပေးတယ်။ တခါလှူပေးလည်း မရ ၂ ခါ လှူပေးလည်း မရ ၃ ခါမြောက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ်ပြောတယ်။
အိမ်မက်ထဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ပြောတယ်။ နောက်ဝင်ပူးပြီး ငိုလိုက်တာမှတဲ့။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောသွားတယ်။
ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိမမရေ အမျိုးအရင်းကြီးမို့ ခရေစေ့ တွင်းကျသိလိုက်ရတာ။